Isgaarsiinta Kismaayo oo Hawada Ku Soo Laabatay Iyo 300 Qof oo La Xir Xiray | KEYDMEDIA ONLINE
Isgaarsiinta Kismaayo oo Hawada Ku Soo Laabatay Iyo 300 Qof oo La Xir Xiray
Kismaayo (KON)- Waxaa hawada dib ugu soo laabatay Isgaarsiinta magaalada Kismaayo ee xarunta gobbolka Jubbada Hoose kadib markii ilaa saaka ay hawada ka maqneyd isgaarsiinta magaalada, sababa la xariira Ciidamada Dowladda oo howlgallo ballaaaran ka waday xaafada kala duwan ee magaalada.
Xaafadaha ay Ciidamadu baaritaanada sida xooggan uga sameeyeen ayaa waxaa kamid ah, Xaafadaha kala ah, Farjano, Faanoole, Shaqaale, Callaley iyo Guul-wade halkaasoo la rumeysan yahay inay wali ku dhuumaaleysanayaan haraadigii Mooryaanta Shabaab.
Howlagalada ay maanta magaalada Kismaayo ka sameeyeen Ciidamada Dowladda iyo Maleeshiyaadka Raaskaambooni ayaa waxaa ay ku soo qab qabteen inka badam 300 oo qof kuwaasoo lagu eedeenayo inay ka tirsanyihiin Shabaab.
Dadka la soo qab qabtay ayaa waxaa ku jira haween iyo dhalinyarao kuwaasoo la sheegay inay xariiro dhow la leeyihiin Maleeshiyaadka mooryaanta Shabaab.
Afhayeenka Maamulka Kismaayo C/naasir Seerar ayaa KON u sheegay in howlgaladaan ay sii wadi doonaan ilaa ay ka xaqiijiyaan amaanka magaalada Kismaayo.